🥇 ▷ Madaxweynaha Xiaomi wuxuu na tusayaa Redmi smartphone Note 8 ✅
Madaxweynaha Xiaomi wuxuu na tusayaa Redmi smartphone Note 8
The Madaxweynaha Xiaomi Lin Bin, ayaa sawir ku daabacay boggiisa shabakada bulshada Weibo kaas oo sababay dood kulul oo ka dhex dhacday bulshada taageerayaasha bogga… Dhexdeeda sida ku qoran dhammaan fikradaha aad ka arki karto Redmi note 8.
Sida iska cad, isha dooddu ma ahayn koobka kafeega oo leh astaanta shirkadda Xiaomi, laakiin waa taleefanka casriga ee miiska saaran isla markaana taas lagu arkaayo gadaasha.
Marka si aad sifiican u arki kartaan waxaan u soo dhowaaneynay muuqaalka oo sidan ayaad u qancin kartaa dhammaan faahfaahinta ka jirta taleefankan casriga ah ee la arki karo.
Haddii aan fiiro gaar ah u yeelano sawirka waxaan arki doonaa taleefan casri ah oo kaamiro hore shaashadda ku dhegan tahay kaliya qeybta sare ee bartamaha. Sideed ku ogaan doontaa kamaradda hore ee casriga Samsung Galaxy Note10 Y Galaxy Note10 + Waa isla goobtii.
Marka loo eego fikradaha badan, sawirka uu daabacay madaxweynaha Xiaomi waxaan arki doonnaa astaanta cusub iyo Redmi note 8, taleefanka casriga ah ee loo yaqaanay inuu ku qalabaysan yahay kamarad 64 megapixel ah.
Marka lagu daro faahfaahinta kaameeraha dusha sare waxaad sidoo kale arki kartaa jiritaanka jaakadda mashiinka muraayadaha 3.5 mm.
Waqtigan xaadirka ah waxaa jira faahfaahin badan oo aan wali la ogeyn. Laakiin iyadoo la tixgelinayo guusha weyn ee soo-saarista Redmi Note 7, imaatinka shirkadda cusub ee Note 8 ee shirkadda Redmi waxaa filaya adeegsadayaal badan. Si kasta oo ay ahaataba adeegsadayaashani waa inay sugaan, maadaama ku dhawaaqista aaladda cusub la filayo inay dhacdo mustaqbalka dhow. Taasi waa, taariikhda saxda ah ee la bilaabay Termalkaan wali lama oga.
Waxaan dhegeysan doonnaa dhammaan wararka la shaandheyn doono si aan u ogaano qaar ka mid ah astaamaha Redmi Note 8, waxaan ballan qaadeynaa inaan kula socodsiinno.
Soo galitaanka Madaxweynaha Xiaomi wuxuu na tusayaa Redmi smartphone Note 8 oo markii ugu horreysay lagu daabacay Red Planet.